Topnepalnews.com | नियमावलीविपरित बसमा छत राख्न व्यवसायीलाई सरकारकै अनुमति
नियमावलीविपरित बसमा छत राख्न व्यवसायीलाई सरकारकै अनुमति
Posted on: September 10, 2017 | views: 344
काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीको दवावपछि सार्वजनिक बसमा छत (क्यारियर) राख्न अनुमति दिएको छ। दसैंका बेला अग्रिम टिकट बुकिङ नै नखुलाइ सरकारसँग सौदाबाजी गर्दै आएका व्यवसायीसामु सरकार झुकेको छ। सरकारले व्यवसायीको दवावमा छत राख्न दिने निर्णय गरे पनि यो कानुनविपरित कदम हो।
दसैंमा २५ लाख सर्वसाधारणलाई उपत्यकाबाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारलाई झुकाउन व्यवसायी सफल भएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा शिव बोहराले लेखेका छन्। सार्वजनिक सवारीमा सरकार व्यवसायीसँग मात्र निर्भर हुँदा सरकार झुकेको हो। शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई साक्षी राखेर व्यवसायीले नियमविपरितका आफ्ना माग पूरा गराएका छन्। गत वर्ष पनि रुट नभएका सवारी चलाउन नदिने भनेपछि व्यवसायीले अग्रिम बुकिङ नै खोलेका थिएनन्।
व्यवसायीको बसको छत राख्न दिनुपर्ने माग पूरा भएपछि दसैंका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ मंगलबारदेखि खोल्ने भएका छन्। सरकारले यातायात व्यवसायीले राखेको भाडा वृद्धिको सर्तमा पनि प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको छ। चाडपर्वपछि वैज्ञानिक भाडा प्रणालीका आधारमा भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको हो।
“बसमा यात्रुको सामान राख्न छत राख्न दिने र भाडा वैज्ञानिक प्रणालीमा चाडपर्वपछि समायोजन गर्ने सहमति भएपछि बुकिङ खुल्ने भएको हो,” नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने।
यात्रुका सुविधाका लागि मंगलबारदेखि दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्न व्यवसायी राजी भएको उनको भनाइ छ। शनिबार मन्त्री बलायरको उपस्थितिमा भएको सरोकारवालाको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो। यसअघि सरकारले भदौ २२ गते बुकिङ खोल्ने निर्णय गरे पनि छत राख्न नदिने भनेपछि व्यवसायीले अटेर गरेका थिए।
व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागलाई यसैगरी निरिह बनाउँदै आएका छन्। विभागले नियमावलीमा छत राख्न नपाइने उल्लेख भएकाले कुनै हालतमा राख्न दिन नसकिने भन्दै आएको थियो। तर दसैंको अप्ठेरो देखाइ मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली संशोधन गर्न लैजानेगरि छत राख्न दिने निर्णय भएको हो।
शनिबारको बैठकमा पनि व्यवसायीले भाडा समायोजन प्रक्रिया अघि नबढे बुकिङ नखोल्ने बताएका थिए। मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडादर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि व्यवसायी बुकिङ खोल्न सहमत भएका हुन्।
शनिबार भएको निर्णयअनुसार अग्रिम टिकट बुकिङ भदौ २७ गतेदेखि खुल्ने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। ‘दसैंमा यात्रुलाई सुरक्षित र सहज तवरले घर पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ। यातायात व्यवसायीले पनि यसमा सहयोग गरी अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने हुनभएको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने।
काठमाडौं उपत्यकाबाट दसैं मान्न करिब २० देखि २५ लाख यात्रु बाहिरिने अनुमान छ। व्यवसायीले यसपटक सडकको अवस्था खबराव रहेको, छतमा सामान हाल्न नदिने अव्यवहारिक व्यवस्था गरेको, भाडादर समायोजनामा चासो नदिएको लगायतमा कारण देखाउँदै बुकिङ खोल्न आनाकानी गरेका थिए।
बाटोको समस्या समाधान गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने कर्मचारीले अनिवार्य परिचय पत्र लगाउने, ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचलाई कडाइ गर्ने सहमतिसमेत भएको छ।
रहेनन् वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा
विद्यालयबाट मोटो रकम असुल्न विप्लव’ पार्टीको शैक्षिक हड्ताल
कांग्रेस संस्थापन गुटको भेला, शीर्ष नेताहरूलाई मिल्न दवाव